လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားတိုက်ခိုက် ခံရခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားတိုက်ခိုက် ခံရခြင်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားတိုက်ခိုက် ခံရခြင်း
Posted by ムラカミ on May 31, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 65 comments
မပြောမပီးလို့ ပြောရဦးမယ်. … ကျုပ်တို့ ယောက်ျားတွေ …
လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးရတဲ့ အကြောင်း ….။
ဘယ် အကုသိုလ် အတုံးအခဲတွေ စခဲ့တယ် တော့မသိပါဘူးဗျာ ..
အဲ အဲ့ … ကြိုပြောမယ်နော … သည်ပိုစ့်ဟာ မိန်းမ မကောင်းကြောင်း
ရေးမယ့် ပိုစ့်တော့ မဟုတ်ဘူးနော ..။ ကျုပ်ဟာ မိန်းမတွေ မကောင်းဘူး လို့…
လုံးဝ (လုံးဝ) ထင်မယ့် မြင်မယ့် ပြောမယ့် ရေးမယ့် လူစားတော့ မဟုတ်ဘူး…
မိန်းမတွေ ကောင်း သပေါ့ …။ ကောင်းတာမှ သိပ်သိပ်သိပ် ကောင်း ..။
(မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း ဆိုတဲ့ အယူ ကို မယူတာ …)
ဘာလို့လဲဆို ..ဟုတ်တယ်လေ. ..ကောင်းလို့ဘဲ ..လူသား သမိုင်းတလျောက်
ယောက်ျားတွေ မိန်းမ ယူတာပေါ့ …။ အဲ အဲ့ ..ယူတာမဟုတ် ပေးရတာ..
ထားပါတော့ ..သည်အကြောင်း ..။ လိုရင်း ကို ပြောပါ့မယ်..။
ဘာတဲ့ .. အော်.. အင်း ..ကျုပ်တို့ ယောက်ျားတွေ ..လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားတိုက်ခိုက် ခံရတဲ့ ကိစ္စ …။
ဘယ့်နှယ့်ဗျာ … သည်နေ့ခေတ် နှစ်ထောင့်ဆယ့်နှစ် ကြီးထဲမှာ ..။
မိန်းမတွေက ယောက်ျားတွေ ကိုရင်ဘောင်တန်း မတဲ့ ဆို ….။
သူတို့ ကို တန်းနှိမ့်ထားတဲ့ ကိစ္စ မျိုးတွေမှာ သူတို့က ရင်ဘောင်တန်းမယ်ဆို
ကျုပ်တို့ ကလည်း ကျုပ်တို့ လျှော်ထား လျှော့ထားတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို
တဖန် ပြန်လည် သုံးသပ် ဖို့ လိုလာပြီ မဟုတ်လားဗျာ …။
ကဲပါ ..စပါပြီ …ဒီတေးလ် ပြောပါ့မယ်…။
ဘယ်ကစ မလဲ ဆို ..ဘတ်စ်ကား ပေါ်က စမယ်ဗျာ …။
စကီလေး တယောက် တက်လာတယ်..။ ငတိတကောင် ထိုင်ခုံရလို့
ထိုင်နေတယ် … ။ ကောင်မလား အနားသွားရပ်တယ် ..။ငတိ ဖယ်မပေးဘူး..။
ကိုယ့်ဆြာတို့ သည်မြင်ကွင်း မြင်ရင် ဘယ်လိုပြောကြမတုန်း …ဟင်င်င်င်…။
၁၀၀မှာ ၉၅ယောက်လောက်က အယ်.. ယောက်ျားဖြစ်ပီး ..ဘာညာ သာဒကာ
လုပ်မယ် မဟုတ်လား …။ အဲ့ဒါ ..ခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားတိုက်ခိုက် ခြင်းပဲဗျ…။
တကယ်က ဗျာ ..ငတိ က ဘဏ်မှာ မင်ဂါပါ အော်ပီး တံခါးဖွင့်ပေးရတဲ့
တနေကုန်မထိုင်ရတဲ့ စကျူရတီ ၀န်ထမ်း ဖြစ်မယ်ဗျာ … ။ ကောင်မလေးက
တနေကုန်ထိုင်ရတဲ့ အော့ဖစ်စတပ်ဖ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် …။ငတိက ရုံးအပြန် မို့
ညောင်းလို့ ထိုင်ချင်ရှာမယ်ဗျာ ..။ ကဲ ပြော..လွန်လား …။
ယောက်ျားမို့ ထပေးသင့်တယ် တို့ ..မိန်းကလေး ဦးစားပေးရမယ် တို့က ..
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ …ခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားတိုက်ခိုက် ခြင်းပဲဗျ …။
ဘယ့်နှယ့်ဗျာ … ။ ကဲ ဟုတ်ပြီ ..ဆက်မယ် ..ကောင်မလေးက ငတိကို..
ရှင် ရိုင်းလှချည်လား ..ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလား ..။မိန်းကလေး ဦးစားပေးရမယ်
ဆိုတာ မသိဘူးလား ..ဘာညာ ..ရန်တွေ့မယ် ဆိုပါစို့ …။
(ကိုယ့်ဟာကိုယ် အရင်တက်လာလို့ အရင် ထိုင်ခုံရ လို့ အေးဆေး ထိုင်နေတာကို ..နော)
အဲ … ငတိက မျက်နှာကြီးရဲ ဘေးကလူတွေက အေးလေဟုတ်ပ ..သံယောင်လိုက်..
မျက်နှာငယ် လေးနဲ့ ဖယ်ပေးလိုက်ရ …ကြည့်စမ်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ဟုတ်ပါဘီ ကျုပ် အခုပြောနေတာတွေ ငတိက တွေးမိပြီး ခုလို ပြန်ပြောတယ်
ဟ …ကျုပ်ဟာကျုပ် နေရာရလို့ ထိုင်တာ ဘာဖြစ်သတုန်း ..။ ယောက်ျားမှာလည်း ဖင်နဲ့ပဲ..
ညည်းတို့ချည်း ဖင်ပါတယ် … ညည်းတို့ချည်း ညောင်းတတ်တယ် အောက်မေ့သလား …။
ညည်း ကျုပ်လို ဖင်ချချင်ရင်(ထိုင်ချင်ရင်) ကျုပ်လို စောစောလာ နေရာရအောင်လုပ်။
ဒါမှမဟုတ် ..ဂိတ်ရင်းက သွားစီး ..။ တတ်နိုင်ရင် တက္ကစီ စီး ..နားလည်လား ..။
အလကားနေ ဖယ်ပေးရအောင် ညည်းက ဗိုက်ကြီးနေလို့လား ..။ကျိုးနေ ပဲ့နေလို့လား..။
ကဲ ..ကောင်မလေး ဘာပြန်ပြောမယ် မှတ်သလဲ မိတ်ဆွေ..။ ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ မခုတ်ရင်
ကံကောင်း ….။ အနည်းဆုံးတော့ ယောက်ျားကြီး ဖြစ်ပီး နှုတ်သီးကောင်း လျှာပါးလိုက်တာ..။
ငါးစိမ်းသည်ကျနေတာဘဲ ဘာညာ လောက်တော့ အပြောခံရမှာ မလွဲ ….။
ကြည့်စမ်း ..လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားတိုက်ခိုက် ခံရတာ။
ဘယ့်နှယ့်ဗျာ ..ယောက်ျားတိုင်း ဟာ မိန်းမတိုင်းလို ဖင်ပါလို့ ထိုင်ချင်တာ ဖြစ်သလို
ယောက်ျားတိုင်း မိန်းမတိုင်းလို ပါးစပ်၊ လျှာ နှုတ်ခမ်း နဲ့ ..အသံဖြစ်အင်္ဂါပြည့်စုံရင်
စကားပြောခွင့် (ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာ) ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ခွင့် ရှိတဲ့ဟာကို …။ ဘယ့်နှယ့်
ယောက်ျား ဖြစ်တိုင်း မိန်းမတွေနဲ့ ဒီဘိတ်လုပ်ခွင့် ကို တဖက်သတ် နှိမ်ချ ထားခံရတာ ..။
ဒါတောင် မြင်သာတဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်ပဲ ရှိသေးတယ်နော …။
တခြား နေရာတွေ ပြောနေရင် မကုန်ဘူး ဖြစ်သွားမယ်မို့ …။ တခြားဟာတွေထား…
အနုပညာဘက် …သီချင်းဘက်ပေါ့ဗျာ ..သွားရအောင်…။
အထာမကျဘူးဗျာ ..အဲ့ဘက်မှာလည်း …။
ရှီ ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ယောက်ျား အဆိုတော် ဆိုထားတဲ့ ယောက်ျား သီချင်းတွေချည်း
ပြန်ဆိုပီး နာမည်ကြီးလာလိုက်တာ ….။ အံမယ်လေးလေးလေ့လေ. …။
ကောင်းပြီဗျာ..ဒါဆို ကျုပ် နာမည်ကျော်တဲ့ …မခိုင်ဂျီး သီချင်း တပုဒ် ပြန်ဆိုမယ်…
ရမလား .. (တေးရေးခ ပေးရင် ရတာပေါ့…) အိုခေ …ဆိုပြမယ်…
အရင်လို ကြည့်ကောင်းနေတုန်းပဲ အချစ်ရယ်. …
ပြန်တွေ့ရတာ ကိုယ်ဝမ်းသာ ….
ကဲ ပိတ်သတ်ကြီးလက်ခံမယ် ထင်ပါသလား …။ ၀ိုင်း တံတွေးနဲ့ ထွေးလိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်း..
ဟာ ဒီကောင့်နှယ့် ညှီလိုက်တာ … ဖြစ်မယ် မလား …။
ဟတ်ကဲ့ ..တခြား တပုဒ်ပြောင်းဆိုပါ့မယ် …။ မူရင်း သီဆိုသူ အင်္ဂလိကန် စိမ် သီချင်း…။
မချစ်ရင်မနေနိုင်တာကလွဲလို့ …။ သောကဧည့်ခန်းထဲမှာ …သမုဒယ အိပ်ခန်းထဲမှာ …။
ဟာ … တဏှာရူး … နှာဘူး ..။ ကြာကူလီ …ဟာကျူလီ …။
အင် … တားတား ဘာမှားလို့တုန်း ဟင်င်င်င် ….
တွေ့လား ..မိန်းကလေး ဆိုတော့ ပိတ်သတ်ကြီးက မုဒ် အပြည့်နဲ့ နားထောင်တယ်…။
တားတား ဆိုတော့မှ တားတား ..လော်မာတယ် ဖြစ်ရတယ်…။
တော်ဘာဘီလေ. .. အန်တီလေး နဘေဘွဲ့မှူး သီချင်းပဲ ဆိုပါတော့မယ် …မခိုင်ဂျီးက ရှော့ရှိလယ်။
မင်းပေးတဲ့ စံပယ်ဖြူပွင့်တွေလည်း ..နွမ်းခြောက်သွားခဲ့ပေမယ့် …လာလာလာ့လာလား ..
မင်းအိပ်ခဲ့ ကဗလာ စက်ရာလည်း …အေးစက်သွားခဲ့ပေမယ့်……
အို ညှီလိုက်တာ … တွေ့လား ..တွေ့လား ..
ကျုပ်တို့ ယောက်ျားတွေ …လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ …ခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားတိုက်ခိုက် ခံရတာ …
အင်း … ဒါဟာ သည်အတိုင်း မိန်းကလေး သီချင်းတွေ ပြန်ဆိုနေလို့ဖြစ်ရတာ …။
တကယ်ဆိုရင် ..ငါ့စကားလေးနားထောင်တော့ ….
ငါ့ ကိုချစ်တယ် ..ပြောပါတော့ကွယ် …
အသည်းလေးငါပေးမယ်.. ဘာကြောင့်များ နှောင့်နှေးနေလဲ …
အယ် ..တင်စီးလိုက်တာ ..တေဂျင်းဇိုး … ကာလနာ…
ဟင်. .. ဘာမှားလို့လဲဟင်င်င်င်…
တော်ဘီဂျာ …ဘိရုမာ မိန်းကလေး သီချင်းတွေက ညှီတယ်…
ဘိုသီချင်းဘဲ ဆိုတော့မယ် …စပိုက်စ်ဂဲလ် ရဲ့2become 1 ကိုဆိုမယ်..
bealittle bit wiser babe, put it on, put it on …
ဟာ ယုတ်မာလိုက်တာ … ဘက်စတာ့ဒ် ၀ီးယာ့ဒ် ….ကွန်ထရိုဗာရှယ်လ်..
ကြည့်စမ်း ..ကျုပ်တို့ ယောက်ျားသားတွေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားတိုက်ခိုက် ခံရနေတာ …
သူတို့ကျတော့ ဆိုလို့ရတယ်..ကမ္ဘာက လက်ခံတယ်… ကျုပ်တို့ ဆိုမှ ညှီတယ်…ဖြစ်ရော..
အဲဒါတွေ အားလုံးရဲ့ မူလ အရင်းအမြစ် လက်သည် တရားခံဟာ …
အဂ္ဂမဟာ ကွန်ဇာဗေးတစ်ဗ် တွေကြောင့်ပဲ ဆိုတာ …
သဘောပေါက်ကြမယ် ထင်ပါ့ …
ရည်းစားထားရင်ကို ..ယောက်ျားဘက်က စပြောရမယ်တို့…
လက်ထပ်ခွင့်တောင်းရင် ဒူးတဖက်ထောက် ခြေဖမိုးကို လက်ဖွားနဲ့ အုပ်တို့ …
ခွီးတဲ့မှ ..လက်စွပ်ဖိုးလည်း အကုန်ခံရသေး …မပြောကောင်းမဆိုကောင်း
ဒင်းတို့များ ခေါင်းညှိမ့်လိုက်ရင် မသေမချင်းလည်း …လုပ်ကျွေးရဖို့ရှိသေး …
အဲ့ဒါများ ခယ နေရသေးတယ်… ချဉ်ထှာ …။
ကွန်ဇာဗေးတစ်ဗ်များ ပြောကြပါလိမ့်မယ် .. ၃နှစ်၃မိုးတို့ ဘာညာ …
(သဂျီးပြောပြောနေတဲ့ လူဦးရေ ကိစ္စနဲ့ အိုက်ဒါဂျီးနဲ့ အတော်လေး ဆိုင်မယ်..)
အဖြေပေးတာ မြန်ရင်တောင်မှ .မိန်းကလေး ဈေးကျသတဲ့ တော်ရေ့…။
ဈေး ဆိုလို့ ဘယ်လောက်လဲ မေးရင်… ပါးပိတ်ချ ဦးမယ် ….။
သည်တော့ ဂျင်းစိမ်းနဲ့ မိတ်သလင်ဘဲဟေ့ … ညည်းတို့လည်း ဈေးရှိသလို
ကျုပ်တို့လည်း ဈေးရှိရမှာပေါ့ ….ညည်းတို့က ရင်ဘောင်လည်း တန်းချင်သေး..။
အပ္ပါးဟန်း ယူထားတဲ့ကိစ္စတွေကျပြန်တော့လည်း မလျော့ချင် ….။ တရားသလားပြော..။
တကယ်တော့ ..လောကဂျီးရဲ့ ဟန်ချက်ကို ထိန်းဖို့ ဒီစာတွေကို ရေးရတာ ဖြစ်တယ်…။
ရင်ဘောင် လာတန်းကြပါ…။ မတားပါဘူး…။ အပ္ပါးဟန်း ယူပီး ယောက်ျားသားတွေကို
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားတိုက်ခိုက် တာတွေကိုလည်း လျှော့ကြပါ…။
ယောက်ျားမှာ ယူစရာဆိုလို့ မိန်းမ ဘဲရှိပြိး မိန်းမမှာလည်း ယောက်ျားကလွဲရင်
တခြား ယူစရာ မရှိတာကို သတိချပ်စေလိုပါတယ်။ အဲ…ဘူ-ဘူချင်း ၁လုပ်တဲ့
လက်စ္စဘီယံ နဲ့ ဂေး ကိုတော့ အားမပေးပါ။
ဟိုဘက်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ အကြွေး တခါတည်း ထည့်ရေးလိုက်ပါမယ်…။
relationship with freedom ဆိုတဲ့ အာပျိုဂျီးများ ကြပ်ကြပ်သတိထားပါ …။
finally married to narcissism ဖြစ်တတ်တယ် ဆိုတာလေးပါ…။
ယောက်ျားသားများအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားတိုက်ခိုက် တာတွေ
CEO of IASO(international anti-spinster organization)
mg မှာစာဖတ်နေတာ(3)နှစ်လောာက်ရှိပေမဲ့ အခုမှ ၀င်မန့်ဖြစ်တာပါ ။ ဒီရက်ပိုင်းချဉ်ထှာတွေများနေလားလို့ ၊ အသဲလေးလဲအချဉ်ပေါက်သွားအုန်းမယ်နော် ။ ခင်လို့စတာပါ။
လိင်ပိုင်း ခွဲခြား ဆက်ဆံ မခံရအောင် ဒီကနေ့ ဒီအချိန်က စပြီး ဂိဂိ စကတ် ၀တ်သင့်ပါပြီလို့ အဆိုပြုပါတယ်။
ကိုဂီရေးပြလိုက်မှ ကျုပ်တို့ယောက်ျားသား ဘ၀တွေက..
ဂလောက်တောင် အနှိမ်ခံနေရမှန်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီး တွေ့လိုက်ရတယ်…
ဆိုတော့ ယောက်ျားသားများလိင်ခွဲခြားအနှိမ်မခံရရေး …ဒို့အရေး
Honorable member of IASO
ဟုတ်ပအေ…… မိန်းမတွေများ တို့ယောက်ျားတွေကို နိုင်တိုင်းကျင့်ထှာအေ…… ဟွန်း…… နာလဲ လက်မထောင်ခဲ့တယ်ဟေ့…… ဘယ့်နှယ့်အေ ကျုပ်တို့ယောက်ျားတွေ ဘယ်လောက်နစ်နာသလဲ…… ရှာဖွေကျွေးမွေးရတာကတစ်လုပ်……. ညဘက်အိပ်ယာထဲရောက်ရင် သူတို့ကပဲ ညောင်းချင်ညာချင်သေးအေ…….. တော်ပါပီအေ….. လူပျိုကြီးပဲလုပ်တော့မယ်…… မိန်းမတွေ အနိုင်ကျင့်တာမခံဘူးဟေ့………………
လူပျိုကြီးပဲ လုပ်တော့မယ်ဆိုတာ ဘာစကားကြီးဒုန်း.
ဘယ်အချိန် ဘယ်ကာလ ကတည်းကများ
စုဆည်း သိမ်းဆည်း အောင့်အည်း နေခဲ့ရပါလိမ့်…
မြင်တတ် တွေးတတ် ရေးတတ်ပုံများ…
ရှားမှရှား တစ်ကယ့်ယောက်ျား ပါလား…
ဂီဂီရေ…နောက်ဆို ဒီအချက်တစ်ခုထဲနဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာနေရာရရင်တော့ ကောင်မလေးချောချောလေးတွေဆို နေရာဖယ်မပေးတော့ဘူး ခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားတိုက်ခိုက် ခံရတယ်ထင်လို့…..ဟီ…ဟီ…
ဒီစကားမျိုး ဒီ ရက်ထဲ ပြောထားတာ ဆိုတော့ ငြိမ်နေလို့တော့ မရတော့ဘူး နဲနဲဝင်ပြောမှ
ကိုရင်ဂီ ပို့စ် မှာ တကယ်ပြောခဲ့တာက မရှိမကောင်း ရှိမှ ( ရှိမှ) ကောင်းလို့ ပြောလိုက်တာကို
ကိုရင်ဂီ ဘာသာ မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း လို့ မြင်တာပါကွယ်
မိန်းမ ဆိုတာ ရှိမှသာ ကောင်းပါတယ် ၊ မရှိရင် လုံးဝ မကောင်းပါဘူး……
သူတည်း တစ်ယောက် ကောင်းဘို့ ရောက်မူ သူတစ်ယောက်မှာ ပျက်လင့်ကာသာ ဓမ္မတာတည်း လို့ပါ
အခုတော့ သူတည်း တစ်ယောက် ကောင်းဘို့ရောက်မူ တရွာလုံးမှာ ပျက်လင့်ကာသာ ဓမ္မတာတည်း ဖြစ်နေရပါတယ်
အဲဒီတော့ ဂီဂီ ကို ငြင်းလိုက်တဲ့ မိန်းမချောလေးရေ( ဂီဂီကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ချောမှာပဲ လို့ ယူဆရတာပေ့ါ)
တရွာလုံးကို ထောက်ထား ညှာတာသော အားဖြင့် ပြန်လက်ခံ လိုက်ပါကွယ်
ကဲ လစ်ပြီး ဝေါ………………..
ယောကျားလေးပဲ ဆိုပြီး အယူအဆ ဘယ်လိုစသလဲ တွေးကြည့်ကြရအောင်..
မောင်၁ထမ်း မယ်၁ရွက် ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးက စစဉ်းစားကြမယ်။
ဒီစကားပုံကလေး မှာ ယောကျားက ၁ထမ်း မိန်းမ က ၁ရွက် ဆိုတော့ အလေးချိန် အတိုင်းအဆ မှာတော့ ၂အချိုး ၁ လောက်တော့ ကွာမယ် ထင်တယ်။
အရင်ခေတ်က ယောကျားတွေက အားကောင်းမောင်းသန် ရှိကြလေသလား သန်မာထွားကြိုင်းလေသလား မသိဘူးကွယ်.. နတ်ရှင်နောင် ကဗျာတွေ တောင်တွင်းရှင်ငြိမ်းမယ် ကဗျာတွေမှာ မောင်ကြီးတို့ စစ်ပွဲတွေ ကြားမှာ တိုက်ခိုက်နေရတယ်။ အချစ်ရယ် စသဖြင့် အဓိပ္ပါယ် ဖော်ဆောင်တဲ့ စာတွေ ရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒီခေတ်တွေတုန်းက ပြန်ကြည့်မယ် ဆိုရင် တနေရာနဲ့ တနေရာ စစ်တွေ ဖြစ်ပြီး နယ်မြေလုပွဲတွေ မတည်ငြိမ်မှုတွေကြားထဲမှာ တိုက်ခိုက်နေကြတာ ယောကျားတွေ အများဆုံး ဖြစ်သမို့ ယောကျားတွေ က အားရှိသန်မာ အဆင့်ထဲမှာ ပါပြီး မောင် ၁ထမ်း ဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်လို့ တွေးလိုက်မယ်။ မောင် ၁ထမ်း ခေတ်ကနေပြီးတော့ စစ်တွေ မရှိပညာတတ်တွေ များလာတော့ မောင်တထိုင် ဆိုပြီး ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ မထတမ်း နိပ်နေတဲ့ မောင်ကြီးတွေလည်း များသား.. အခုခေတ်ကြီးက မောင်တထိုင် ခေတ်လို့ ပြောရမယ် ထင်တယ်။
ကွန်ပြူတာတွေ နဲ့ တိုးတက်တဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ မောင်တထိုင်တွေ မယ် တထိုင်တွေ များလာတာ တခြားမဟုတ်ဘူး ထင်တယ်.. ကာယစွမ်းအားကို အသုံးပြုရတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ မယ်တွေ အိမ်မှာ ထမင်းဟင်းချက်ပြီး ကလေးထိန်းရတယ်။ ဥာဏစွမ်းအား အသုံးပြုရတဲ့ ခေတ်မှာတော့ မယ်တွေလည်း အိမ်ထဲမနေသာတော့ဘူး။ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်လာကြတယ်။ အဲဒီမှာ တချက် စဉ်းစားစရာကတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာလည်း ဥာဏ်ရည် မနိမ့်ဘူး အမျိုးသားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒီအချက်ကို လစ်လျူရှုတဲ့ အမျိုးသား တချို့ကတော့ အရင်ခေတ်က မိန်းမတွေ အိမ်ထဲနေတော့ အိမ်က လူတွေက သားကို သခင် လင်ကို ဘုရား သဘောထားခံရတဲ့ စနစ်ကြီးကို အခုထိ ရင်ထဲမှာ သိမ်းထားပြီး အမျိုးသမီးတွေကို အကောင်းမြင်စိတ်နည်းလာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ခေတ်ကလို အမျိုးသားတွေလည်း ကြွက်သား အဖုအထစ်တွေနဲ့ မဖြစ်တော့ပဲ ပုလွေရိုး လေးတွေ များလာကြတယ်။ အင်အားကို အသုံးပြုတဲ့ အမျိုးသားတွေက ကြွက်သား အဖုအထစ် အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း တော်တော် လုပ်မှ ရမယ် ထင်တယ်။ အခုခေတ် အမျိုးသားတွေလည်း ပုလွေရိုး ခြေလက်တွေ နဲ့ ဖြစ်ချင်ဖြစ် မဖြစ်ရင် ဘီယာဗိုက် နဲ့ အဆီရွဲတဲ့ လူတွေ များလာကြတယ်။ ကာယအား အသုံးချမှု အားနည်းခြင်း ဆိုတဲ့ သက်သေတွေ ပဲ လို့ ပြောလို့ ရမယ် ထင်တယ်။ ဥာဏ အသုံးချ တဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာလည်း ပုလွေရိုးတွေ ဘီယာဗိုက်တွေကိုတော့ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။ သူ့ အကြိုက်နဲ့ သူမို့ သူ့ အတွဲနဲ့ သူအဆင်ပြေနေကြတာပဲ မဟုတ်လား။
အိန္ဒိယလို လူတန်းစား ခွဲခြားတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ယောကျားသေရင် မိန်းမ ကိုပါ လိုက်ပြီး မီးသဂြိုလ်တဲ့ နိုင်ငံ အခုတော့ အဲဒီ အယူအဆ ပျောက်ဆုံးသွားသော်လည်း ယောကျား မရှိတဲ့ မိန်းမ(မုဆိုးမ) အဖြူကို သေတဲ့ အထိ ၀တ်ရပြီး သေတဲ့ အထိ ပန်း မကိုင်ရပါဘူး ပွဲလန်းသဘင် မတက်ရပါဘူး အမြဲတမ်း အားငယ်သူ ဂုဏ်ငယ်သူ နိမ့်ချခံရတဲ့ ဘ၀နဲ့ နေရအောင် ကျင့်သုံးတဲ့ စနစ်မကုန်သေးပဲ ကျင့်သုံးနေဆဲ ပါပဲ.. အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်တွေ မှာ ကြည့်မယ် ဆိုရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ထိုခေတ်ကြီးစနစ်ကြီးထဲမှာ နေထိုင်တဲ့ လူတွေထဲမှာတောင် မှ.. အမျိုးသားတွေကို စစ်တမ်းကောက်တဲ့ အခါ သမီးမွေးထားတဲ့ လူတွေက အမျိုးသမီးတွေ မညံ့ဘူး ဆိုတာ ၀န်ခံကြတယ်။ သားချည်းပဲ မွေးတဲ့ လူတွေကတော့ ၀န်မခံကြဘူး လို့ စာတခုမှာ ဖတ်ဖူးတယ်။
၀န်မခံကြသူတွေဟာ ရှေးရိုး အယူအဆတွေ မစွန့်လွတ်နိုင်ပဲ မိန်းမတွေ အပေါ်မှာ အကောင်းမြင်စိတ်နည်းပါးသူတွေလို့ လည်း ရေးထားတာတွေ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
အိမ်က ဇနီးမယား လက်ခုပ်ထဲက ရေလိုသဘောထားပြီး ပြုစုမှုတွေ ခံယူပြီး နေပေမဲ့ သမီးမွေးလာတဲ့ အခါ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စွမ်းရည်တွေကို အချစ်ဆိုတဲ့ စွမ်းအားကြောင့် မြင်လာကြတယ်။
အမှန်တော့ ယောကျားကော မိန်းမကော ၂မျိုးလုံးက လူထဲက လူတွေပါပဲ..
လူထဲမှာမှ စိတ္တဇ ဆေးရုံကို သွားကြည့်လိုက်ပါ ယောကျားမှ ရူးပြီး ကျပ်မပြည့် ဖြစ်နေတာ မဟုတ်သလို မိန်းမမှ ရူးပြီး ကျပ်မပြည့် ဖြစ်နေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
သိပ်တော်ပြီး ထိပ်တန်း ရောက်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာလည်း မိန်းမတွေ ပါသလို ယောကျားတွေ များစွာ ရှိပါတယ်။
ယောကျားနဲ့ မိန်းမ နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ယောကျားနဲ့ မိန်းမ ခွဲခြားခြင်း မဖြစ်မနေ လုပ်သင့်တာကတော့ အိမ်သာပဲ ရှိတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ချစ်ခွင့်ပန်ခြင်း ချစ်ရေးဆိုပြီး စောင့်ဆိုင်းခြင်း ဆိုတာတွေက တဦးချင်းစီရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကိစ္စတွေပါ။
အမျိုးသမီးတိုင်း ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်တာ ဂိဂိ ပိုသိပါလိမ့်မယ်။
သားငါးဈေးမှာ ၀ယ်တဲ့ အသားထက် စူပါမားကတ်မှာ ၀ယ်တဲ့ အသား ဈေးပိုပေးရပါတယ်။ နေရာအနေအထားနဲ့ ပစ္စည်းရဲ့ လတ်ဆတ် သန့်ရှင်းမှု အမြင်နဲ့တင် ကွာခြားသွားပါတယ်။ ဒီဈေးနဲ့ တန်တယ် ထင်လို့ ၀ယ်စားတဲ့ သူတွေကို အရူးလို့ ပြောရင်တော့ ပန်းသီးကြွေတာကို မိုးပြိုတယ် လျှောက်အော်တဲ့ ကြက်ကလေးလို ဖြစ်သွားမပေါ့.. ဒီလို ဈေးတွေမှာ ၀ယ်စားနေတဲ့ သူတွေအများကြီး ရှိတယ်။ အဓိက ကိုယ်ဘယ်အတန်းအစားထဲက ၀ယ်ပြီး စားသောက်နေလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကို အသိဆုံးပါပဲ.. တခြားလူတွေ ထက် ကိုယ့်ဟာကိုတော့ လိမ်လို့ မရပါဘူး။
ဘယ်အသားပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချက်လိုက်လို့ ဟင်းဖြစ်သွားရင် တော့ အတူတူပါပဲလို့ မြင်ပြီး ဈေးထဲမှာ အုန်းဒိုင်း နဲ့ ခုတ်ထစ်နေတဲ့ ဈေးသည်တွေဆီက ၀ယ်စားလည်း ဘယ်သူမှ မပြောပါဘူး။
ဂိဂိ တယောက် မနက်ဈေးမှာ ခြင်းတောင်းတလုံးနဲ့ ဘွက်တောထဲ မှာ ငါးတွေ အသားတွေ ၀ယ်ပြီး ဈေးသည်ကို မတရားဈေးဆစ်ပြီး အဆစ်တွေ တောင်းနေတာတွေ့တယ်လို့ မြင်တဲ့ လူတွေ ရှိလို့ ပြောတာတွေလည်း ရှိချင် ရှိမှာပေါ့..
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ပါ.. လောကမှာ အပျိုကြီးဆိုတာ ယောကျား မယူသေးမှ အပျိုကြီးလို့ ပြောလို့ ရတာပါ။
မိန်းမ တိုင်း ကို လိုက်မေးကြည့်ပါ.. အပျိုကြီး လုပ်မလားလို့.. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးကြည့်လိုက်ပါ။
မိန်းမ တိုင်းသာ အပျိုကြီးလုပ်မယ် ဆိုရင် လောကမှာ လူသားမျိုးနွယ်တွေ ပျက်သုန်းခဲ့တာ ကြာခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
မိန်းမတိုင်း အပျိုကြီး လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပျိုကြီး လုပ်ချင်တယ် အော်နေသော အမျိုးသမီးများသည်လည်း အချိန်တန် ဖူးစာဖက် တွေ့ပြီး အပျိုကြီး ဘ၀ ကို စွန့်လွတ်ကာ အိမ်သူ သက်ထား ဘ၀ ကို ရောက်သွားကြသူ များလည်း ရှိပါသည်။
အပျိုကြီး လုပ်တာ ဆန္ဒအရသော်လည်းကောင်း ရတာမလို လိုတာ မရလို့သော်လည်းကောင်း မိဘများ အသက်ကြီးသောကြောင့် စိတ်မချ၍သော် လည်းကောင်း အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်.. ကိုယ်ပိုင် တသီးပုဂ္ဂလ ဆန္ဒအရ လုပ်နေခဲ့တာဖြစ်တဲ့ အတွက် ထိခိုက် စော်ကား ပြောဆိုခြင်း အပျိုကြီးများ ကျပ်မပြည့်ခြင်း ဇီဇာကြောင်ခြင်း ဆိုတဲ့ စကားများသည် လောကတွင် အပျိုကြီး ဂုဏ်ကို ထိန်းထားသော အမျိုးသမီးတိုင်းကို တိုက်ရိုက်စော်ကားခြင်းဖြစ်သဖြင့် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်သင့်ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေးကို အလွန်အမင်း ထိခိုက်စော်ကားရာလည်း ရောက်ပါသည်။
အပျိုကြီးတွေ ကိုယ့်ကလေးမရှိတိုင်း တူတွေ တူမတွေကို ချစ်ရသည် ဆိုသည်မှာလည်း စဉ်းစားစေလိုပါသည်.. ငွေမရှိတဲ့ အပျိုကြီး ဆိုလျှင် အကိုတွေ မောင်တွေ အိမ်မှာသာ ကပ်နေရမယ် ဆိုလျှင် အိမ်ဖော်နဲ့ မခြား နေရတော့မပေါ့.. ဒီလို အကိုတွေ မောင်တွေ ရဲ့ ကလေးတွေ ထိန်းပေးရင်း ချစ်ရ သံယောဇဉ် ရှိရတာ အပြစ်လား.. အချိန်တန်တော့ ခြေစုံကန်ပြီး တသက်လုံး ပြုစုပေးခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေ သူတို့ မိဘ မှ သူတို့ မိဘ ဖြစ်တဲ့ အခါ ဘယ်သူတွေ ရင်ကွဲ ပက်လက် ဖြစ်ကြမလဲ တွေးသာ တွေးကြည့်ကြပါ။
ငွေရှိတဲ့ အပျိုကြီး တူတွေ တူမတွေ ချစ်တာ သေတဲ့ အခါ ပိုင်ဆိုင်တာတွေ ခွဲဝေ ပေးဖို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မုဒိတာ စိတ်ကလေး မွေးပြီး လူတဦးချင်း တယောက်ချင်းစီအပေါ် သေချာ မြင်နိုင်ပါစေ။
အာ ဟ …အာဟ …
ပြဿနာတွေတက် ..အို ..ပြဿနာတွေတက်..
အာပျိုရီး ဂိုဏ်းကို တုတ်နဲ့ထိုးလို့ ..ပြဿနာတွေတက် ..ရို့ …
ဂီ တို့တော့ စိတ်ဖေါက်လာပီထင်ပါ့နော်
အပျိုဂျီးများအား တုပ်ဖြင့်ထိုးခြင်း ခွင့်မပြု ။
အယ် ..ရွာထဲမှာ ဆော် အသစ်တိုးတယ် ဟေ့ …
ဟား….ဟား….ဟား….ဟား……… ကောင်းလိုက်တဲ့ပိုစ့်ဗျာ…… အကုန်ထောင်ပြီးအားပေးပါတယ်ဗျို့………
ကိုဂီ ကလဲ့စားချေတဲ့အနေနဲ့ လက်မကိုအောက်စိုက်ချပြီး အားပေးသွားပါတယ် …… ချလို့ရသမျှ ကိုချပြီး အားပေးလျှက်ပါနော် ……..
အကုန်ထောင်ရင်တော့ ..သရေပင်စာ မိနိုင်တယ်ဗျို့…
အဲဒါဆိုလည်း ကျုပ်တို့ မိန်းမဒွေလို ညည်းတို့ ယောကျာ်းတွေ နွဲ့နေလိုက်ပေါ့အေ…
ဆူးပေါ် ဖတ်ကျလို့ ဆူးကျိုး ချင်နေသပ ဆိုလည်း ..
ကျိုး စေ ကျိုး စေ …. :D :D :D
ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက် ကွာ …
ဒီမယ် ဖားသက်ပြင်း … မင်းကသာ ဟိုပန်းက ဟိုလို
ဒီပန်းက ဒီသဘောနဲ့ ..ပိုက်ပိုက် အကုန်ခံ ပန်းစည်းတွေ ၀ယ်ပို့နေတာ …
ဟိုက မင်းကြိုက်တတ်တဲ့ ၀ိုင်နီလေး ၁ပုလင်းတောင် ပေးဖူးလို့လား ….
အဲ့သည့် ချောကလက်ပြားကြီး ပါကင် လှလှ ထုတ်ပီး ဘာလုပ်မှာလည်းကွာ…
လာပါ …ဘီယာနဲ့ မြည်းကြရအောင်…။
ဟမ် … မင်းက ဘယ်လောက်ချမ်းသာလို့ …ငါအပြားကြီး အသစ် ၀ယ်ပေးဖို့
ကြံနေတာတုန်းကွာ … မင်း တလလုံးလုံးကန်းခါနီးအောင် ပြူးပြဲနေအောင် ရေးရ ဖတ်ရ ဆွဲရတဲ့
ပိုက်ပိုက်လေကွာ ..မနှမျောဘူးလား ..သူများ လုပ်တိုင်း လိုက်လုပ်စရာလားကွာ ..
လိုချင် သူ့ဟာသူ ၀ယ်မပေါ့ ….
ဟေ့ကောင် …မင်းကြံနေတဲ့ အဲ့သည့် ဗယ်လ်ဂရီ ၀မ်းတဆက် ဆိုတာ ..မင်း၁လလုံး
ထမင်းစားလို့ရတယ်နော. ..မမိုက်နဲ့ ကောင်လေး စဉ်းစား စဉ်းစား….
ဖွန်ကြောင်ဖို့ ပိုးကြေးပန်းကြေး အတွက်များသာဆိုရင် ..ကျောက်ကပ် ၁လုံးတောင်
ထုတ်ရောင်းပြီး စရိတ်လုပ်မယ့် ကောင်ပဲ … ။
အဲ့ဒါတွေပဲ ထကြွ သောင်းကျန်းနေလို့ .. ခုလို မာန တွေ ခ၀ါချ ဗျာဘာဒ တွေ
သောကတွေ ဝေ ..တဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လောဘ ကို မသတ်နိုင်လို့ ..
မောဟ အ၀ိဇ္ဇာတွေဖုံး ပီး လူညွန့်တုံးဖို့ သာ ရှိတော့တယ်ကွာ….
(the dark side of Inz@ghi အနေဖြင့် မန့်ပါသည်…)
ကိုဂီရေ. ယောကျာ်းလေးဖြစ်ရတာ မလွယ်လှဘူးဗျ။
ကိုဂီရေ. မိန်းကလေးတွေ မျက်စိစပါးမွေးစူးနေမယ်နော။
အဲ့လာ ကျောရာပေါ့ …
သမိုင်းတလျောက် ပြန်ကြည့် ..စစ်တွေ ဘာတွေဖြစ်ရင် ကျုပ်တို့ဘဲ…
ထိပ်က တက်အသက်ပေးခဲ့ရတာချည်း …။
သည်တော့ စစ်မဖြစ်တဲ့ အချိန် အေးအေးလူလူကာလမှာ …
အော်… လိုအပ်ရင် အသက်ဆိုဒါဂျီးတောင် ပေးအပ်ရမယ့်
လူဒွေပါလား ဆိုပီး ဦးစားပေး သင့်တယ် ထင်ရဲ့ဗျာ ..မဟုတ်ဝူးလား..
တခြားမကြည့်နဲ့ ..ကျုပ်တို့ ချစ်တဲ့ လေးစားတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကြည့်…
သည်လူကြီး မစွံတာ ..သူ့ဟာသူ အစွံထုတ်ချိန်မရှိရှာလို့ ..ဆိုတာ ကို
မိန်းမတွေဘက်ကစပြီး ရည်းစားစကား စပြောတဲ့ ကာလချာသာ
ဖွံ့ဖြိုးခဲ့မယ်ဆို …သည်လူကြီး စွံကောင်း စွံမှာ မဟုတ်လားဗျာ …
ချောပုံချောပန်းနဲ့ဗျာ .. နော့ …
ပိုးခြင်း ပမ်းခြင်း ဖွန်ကြောင်ခြင်း အမှု ကို ယောက်ျားသားတွေသာ
လုပ်ရမယ် လို့ သတ်မှတ်ထားတာကြီး ပယ်ဖျက်ပြီး ဟို ဟာလဘွားဂျီးပြောသလို..
မောင်တထမ်း မယ်တရွက်သာ ဆောင်ရွက်ကြမယ် ဆိုရင်ဖြင့် …
ယောက်ျားတွေ ဖွန်ကြောင်ချိန် နည်းပါး သက်သာသွားပြီး
အလုပ်ပိုလုပ် လာနိုင်မယ် ..ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ပိုတက်လာမယ်…
တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂျီဒီပီ တွေ ဘာတွေ အထိကို ထိရောက်မယ့် ကိစ္စဗျ…
ဒီကိစ္စ အမျိုးသားရေး မဟုတ်လို့ ဘာတုန်းဗျာ …
ကျုပ်ကတော့ ဖင်ပါလို့ ဖင်ချ ( ထိုင် ) တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးလိုပါတယ်
ထိုင်တယ် ဆိုတာ ဖင်ပါလို့ထိုင်တာလား
ဖင်ဆိုတာ ထိုင်ဘို့အတွက်လား ဆိုတာကိုဝေဖန်ပေးကြဘို့အဆိုတင်သွင်းပါတယ်
ရူးပေါက်မလွယ်တဲ့ မိန်းမတွေကို ငဲ့ညာသင့်ပါတယ်
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ ရှူးကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ပန်းတာ ယောက်ကျားဒေသာဖစ်ဘာဒယ်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားဖိနှိပ်စော်ကားခံရတယ်ဆိုတာ ယောက်ျားလေးတွေဘက်ကနေကြည့်ပြီးပြောရင် မိန်းကလေးဘက်ကလည်း ပြန်လည်ချေပပြောဆိုချင်ပါတယ် …….
Bus car ပေါ်မှာ နေရာရတာ ထိုင်ပါ မပြောလိုပါဘူး သူလဲလူသားကိုယ်လည်းလူသားပါပဲ ……
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က အဲဒီထိုင်နေတဲ့ ယောက်ျားလေးကို သဘောကျလို့ကြည့်မိရင် အဲသကောင့်သားက ဒီကောင်မလေး အိနြေ္ဒကိုမရှိဘူး မိန်းမ ဖြစ်ပြီး မျက်စိအငြိမ်မနေဘူးဆိုတဲ့ လေသံတွေကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဖင်ကျွတ်တက်အောင်ထိုင်ငမ်းနေတဲ့ ရှင်တို့လိုငတိတွေက အတင်းပြောကြဦးမယ်မှတ်လား ………
ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေလည်း အလှအပကိုခံ စားတတ်ပါတယ် ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိပါတယ် …….. ရှင်တို့ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးကို စာလိုက်ပေး အိမ်ရှေ့မှာ ဂစ်တာတွေတီးလို့ရပေမယ့် ကျွန်မတို့မိန်းကလေးများ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးကို အဲသလိုလုပ်မိရင် ရှင်တို့က အဲဒီမိန်းကလေးတွေကို ဘယ်လိုမြင်မလဲ …..
ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးများကျတော့ ကိုယ်ကဘယ်လောက်ပဲယောက်ျားယူချင်ပါစေ ရှင်တို့က မယူနိုင်ဘူးဆိုရင် ကျွန်မတို့က ငုပ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေရတယ်ဘ၀ …..
တန်ခိုးကြီးတဲ့ ဘုရားပုထိုးတွေဆို ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေ ၀င်ရောက်ဖူးမျှော်ခွင့်မရတဲ့ ဘ၀ကိုရော ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါ ………
ရှင်တို့ယောက်ျားတွေက မိန်းမယူပြီး စမောထားတော့ ငါရှာနိုင်လို့ငါထားတာ …….. မိန်းမတွေများ ယောက်ျားယူပြီး စမောထားရင် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမဆိုပြီး2in 1ကို ရှင်တို့ယောက်ျားတွေ ရှုံ့ချမယ်မှတ်လား …….အဲဒီမိန်းမကိုလည်း ရှင်တို့ဆက်ပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူး …….
ရှင်တို့ကစိတ်ညစ်လို့ ပျော်လို့ ရည်စားရလို့ ရည်းစားနဲ့ပြတ်လို့ဆိုပီး အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဘီဘီဆိုင်ကို ညအချိန်မတော်တဲ့ထိသွားလာနေလဲ ငါကအိမ်ထောင်ဦးစီး ငါကယောက်ျားကွ ဆိုတာနဲ့ မိန်းမတွေကခွင့်လွှတ်လိုက်ရတယ် မိန်းမတွေများစိတ်ညစ်လို့ ဘီဘီဆိုင်ကို ညတိုင်းသွားခဲ့ရင် ရှင်တို့ယောက်ျားတွေကရော အမြင်ကြည်ပါဦးမလား ….
ညဘက်လေးလှတပတပြင်ပြီးအပြင်မထွက်နဲ့ မိန်းမကောင်းလို့မမြင်ချင်ကြတဲ့ရှင်တို့စိတ် …. ရှင်တို့ယောက်ျားတွေကျတော့ လှလှပပညဘက်ထွက်တော့ပိုက်ဆံရှိလူကုံထန်မို့လို့ထွက်နိုင်တာတဲ့ … အံ့ရော အံ့ရော ………
လတ်တလောစဉ်းစားမိတာလေးရေးထားတာ ထပ်စဉ်းစားမိရင်ထပ်လာမန့်ပါဦးမည် ……..
>>>>>>မိန်းကလေးတစ်ယောက်က အဲဒီထိုင်နေတဲ့ ယောက်ျားလေးကို သဘောကျလို့ကြည့်မိရင်
ကျိဇမ်းဘာ ..ကျိလိုက်စမ်းဘာ …. ကျုပ်တို့ဘက်ကချည်း ဖွန်ကြောင်ရတဲ့
ဒုက္ခက သက်သာသွားတာပေါ့ ….
>>>>>>>ရှင်တို့ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးကို စာလိုက်ပေး အိမ်ရှေ့မှာ ဂစ်တာတွေတီးလို့ရပေမယ့်
လာတီးဇမ်းဘာ …ဟံမာမင်း …မတီးပေမယ့် …သီးသန့်ဖြစ်တည်မှု တို့ဘာတို့
သီချင်းခေါင်းစဉ်လေးတွေဘာတွေ လက်တို့ရင်းကို … ဖော်ပြနိုင်ပါရဲ့အေ…
>>>>>>>ကျွန်မတို့က ငုပ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေရတယ်ဘ၀ …..
အရပ်ကတို့ ကို ဗျို့ ဟစ်စ် လိုက်စမ်းဘာ …
>>>>>>>တန်ခိုးကြီးတဲ့ ဘုရားပုထိုးတွေဆို ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေ
တိဝူး ..တားတား လုပ်ခဲ့တာ မီဟုတ်လို့ ..တားတား မတိဝူး..
>>>>>>>မိန်းမယူပြီး စမောထားတော့ ငါရှာနိုင်လို့ငါထားတာ ……..
ဒါတော့ မကောင်း … စမောဆွဲတာကို မောင်ဂီ့ အားမပေး…
>>>>>>>အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဘီဘီဆိုင်ကို ညအချိန်မတော်တဲ့ထိသွားလာနေ
မိန်းကလေး သီးသန့် ဘီဘီဆိုင် ဖွင့်မလား စဉ်းစားမိပါတယ်အေ….
ဂယ်ပါ. ..အချိန်နည်းနည်းစောင့်ပေးပါ …
ထွက်ပါ ..တခုတော့ရှိပါဒယ် …ဆေ့ဖ်တီး နိဒ် နဲ့ ပရော်ပါးတီး အော် ..ပိုဇစ်ရှင်းနင်းနိဒ်
ဘယ်တော့များမှ ၀က်သားဒုတ်ထိုး ရောင်းစားပြီး အသက်မမွေးပါနဲ့
ဂျီးဒေါ်ခိုင်ခိုင်ရေ …ခင်လို့ သတိပေးတာပါ…
အယ် ….. ဘာတွေပြောနေတာလဲ ၀က်သားဒုတ်ထိုးရောင်းစားတယ်ဆိုတာ နားမလည်ဘူးအေ … ၀က်သားဒုတ်ထိုးလည်းမရောင်းစားဘူး ၀ယ်လည်းမစားဘူး ……. ၀က်နားရွက်ပြာဖြစ်ပြီးက တည်းက မစားတာကြာပေ့ါ ………
အော်. . ၀က်သားဒုတ်ထိုးရောင်းစားရင် မွဲဖို့ကိန်း မြင်လို့
စေတနာနဲ့ တားရတာပါအေ ..မလုပ်စားဘူးဆိုလည်း ပီးတာပါဘဲ..
ဘာလို့ ဒုတ်ထိုး မရောင်းခိုင်းလဲ သိလား???
အထူအပါးနားမလည်ဘူးဟုတ်လား …….. အဟိ လည်တဲ့နေရာမှာလည်းလည်ပါတယ်အေ …. တစ်ခုတော့ရှိတယ်အေ့ နာက စာပေ ဗဟုသုတအပိုင်းတွေတော့ အားနည်းတယ် ရင်ထဲရှိတာကို အမှန်အတိုင်းပြောတတ်တာနာ့ရဲ့ အားနည်းချက်ဖြစ်နေမလား ဒါကြောင့် လူမုန်းများသလို လူချစ် လူခင်လည်းများတယ်အေ့ ……… :haha
သူတို့က လူဦးရေ အချိုးအစားက ပိုများသဗျ….
ဘေးနားကနေနားပူအောင်ပြော၊တော်ပါဘီ ကိုဂီရာ စိတ်ညစ်စရာပါ။
ခုတော့အေးရော ဖြတ်ပလိုက်ဒယ်။ဖုန်းပါပိတ် အွန်လိုင်းမှာ လိုက်ပွား
ပျော်ချာကြီး အဟေးဟေး။တစ်ခါတစ်လေတော့ သတိရမိသား……..
၁ နဲ့ င လိုပေါ့ ၊ သူ့ဘက်ကကြည့်ရင် သူမှန်တယ်၊ ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင် ကိုယ်မှန်တယ်လေ ….
ကျနော့် အတွက် မလိုပါဝူးဗျာ ..
ကျနော်က ပိုလို့ လျှံတောင် လျှံနေပါသေးတယ်…
finally married to narcissism????????
ဘာကိစ္စ အတ္တပေဒနဲ့ တွေ့ရမှာလဲ ။ အဲ့ဒါ သူများ မပြောခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ပြန်မေးကြည့်လိုက်အုန်း။
ကြည့်ရတာ ရောဂါက တဖြည်းဖြည်းရင့်လာပြီထင်ပါတယ်။ ဒီဆေးနဲ့ မရရင် ဆေးပြောင်းသောက် ဆရာဝန်ပြောင်းကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
မတော်တဆ စိတ်ဖောက် စိတ်လွတ်နေတဲ့အချိန် ဘူတာမှာများ ပြောကောင်း ဆိုကောင်း သံလမ်းပေါ်ပြုတ်ကျပြီး အပိုင်း ပိုင်း ပြတ်သွားရင်တော့ ခုလိုမျိုး အကုသိုလ်တွေပွား မေတ္တယစိတ်တွေ ဒေါသတွေ မောဟတွေနဲ့များ သေသွားရင် အပါယ်ကို တခါထဲ ဂိုးသွားအုန်းမယ်။ ဖွဟဲ့ မလွဲပါ မဖယ်ပါစေနဲ့။
အဲ့ဒီတော့ မုဒိတာတရား ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမဆို ပွားများနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
ဒုက္ခသစ္စာ ၊ သမုဒယသစ္စာ ၊ နိရောဓသစ္စာ ၊ မဂ္ဂသစ္စာ စတဲ့ သစ္စာတရား လေးပါးသိအောင် လုပ် ကိလေသာ ဆယ်ပါး ငြိမ်းအောင် ကြိုးစားပါ။
အရူးတွေထဲမှာတော့ ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ လူမသိ သူမသိ ဆိုက်ကို ၀င်နေတာ၊ ရတာမလို လိုတာမရ နဲ့ ရံဖန်ရံခါ ဟီလူဇီနေးရှင်း ဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါက ပိုဆိုးပါတယ်။ ဆေးကို လှုပ်သောက်ပါ။ ပုံမှန်မသောက်ရင် ဆေးမတိုးပဲ ဖြစ်နေပါ့မယ်။ :mrgren:
နောက်ဆို ကျိချယ်ရီက ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်ယုံမက အတွေ့ပါ မခံပဲ နေပါလိမ့်မယ် ။
စကားမစပ် ဒီရက်ပိုင်း မြစ်ကြီးနားဘက်က ယူစိုက်ထားတဲ့ ဒမ်ဒိုဘီရမ်အုပ်စုဝင် သစ်ခွရိုင်းတမျိူးက နွေအပူကို အံတုပြီး ပွင့်လာလို့ တခြား မျိုးရိုင်းတွေလည်း ပွင့်လာတယ် ။ ဒီနှစ်တော့ ရာသီတအားပူလို့ အရိုင်းတွေ မပွင့်တော့ဘူး မှတ်နေတာ။
ဒီရက်ပိုင်း ပူလွန်းရတဲ့ အထဲ သွေးပေါင်တွေပါ ကျနေလို့ နောက်နှစ်နွေဆိုရင်တောင် ရန်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား မသိ။ :?
သစ်ခွ ကိစ္စ အတော် စိတ်ဝင်စားပါတယ် …
အန်ဒရိုးဗီးယန်း တွေကို ချစ်ပါတယ်…အဲ့ …
ဆာကူရာ သာ အချစ်ဆုံး…
ဆဲထား ကြိမ်းမောင်းထားတာလည်း ရဇယာ မရှိတော့ပါလား ဟရို့….
အင်း …ကျုပ်က ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောလေးဒွေ ..
စာတွေ့ ငါတွေ့ အနည်းငယ်လေးဒွေ နဲ့ …သီအိုရီတွေ
မဟုတ်ရင် မဟုတ်ဝူး ပြောပေါ့…. ဥပမာ..
ငါကတော့ …ဇီဇာကြောင် အာပျိုရီး မဟုတ်ဝူးဟဲ့ ..တို့ …
ငါက ရတာမလို လိုတာ မရ မဟုတ်ဝူး ဟဲ့ တို့ ….
ကျနော်က ဂျန်နရယ်လိုက်ဇ် ရေးတာဆိုတော့ …
အန်တီတို့က ..အိပ်စပ္ပရှင်နယ်လ် ကေ့စ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာမို့…
ကိုယ့်ဟာကိုယ် အဲ့လို ဖွင့်ဆိုရှင်းတာ အကောင်းဆုံးပါဗျာ…
ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောလေးဒွေကို မတူတဲ့ အမြင်နဲ့လည်း
ရေးရသေး …ဆဲခံလည်းထိသေး …ရက်စက်လိုက်ကြဒါအေ. ..
ဒါကြောင့်ပဲ မစွံကြသလား မဆိုနိုင် …
ကိုဂီရေ … ဖတ်ပြီးရယ်လိုက်ရတာ အရမ်းပါပဲ … ။
ကျွန်မလည်း မိန်းမတွေက ၊ ယောကျာ်းတွေနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တယ်လို့ ခံယူထားတဲ့ စိတ်ရှိတာမို့ … ယောကျာ်းတွေ ကိုယ့်အ၀တ်ကိုယ်မလျှော်တာ ၊ ကိုယ်စားပြီးသား ပန်းကန်ကိုယ်မဆေးတာ ၊ ကိုယ့်ထမင်းဟင်းကိုယ်မချက်တာ ၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေး ၊ အိမ်သာ သန့် ရှင်းရေး မလုပ်ချင်တာကစလို့ ….. ကိုယ့်ဖိနပ်ကိုယ်တိုက်ချင်တာတွေကို ………… မိန်းမများ အကူညီမယူပဲ ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ အဆိုတင်သွင်းပါတယ် … ခွိခွိ
အဲ့ဒါဒွေ ကိုယ်တိုင် လုပ်ရက်နဲ့ ကွာ …
ဂုလိုမျိုး ဂုလိုမျိုး ….
ကျနော် ဟာသရေးထားတာကို ဟာသလို မြင်နိုင်တဲ့ ဟာသဥာဏ်ကို..
အစ်မ ထောက်ပြတာတွေကလည်း အမှန်တကယ် ဟုတ်တဲ့အချက်တွေပါဗျာ..
လောင်းကစားဖက် ရှက်ကီထု လက်ကျောမတင်း အဲ့ ..အားရင်
မိန်းမရိုက်တတ်တဲ့ (မိန်းမလုပ်စာထိုင်စားတာတောင်) ယပက်လက် အထီးတွေ..
(အများစု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျ …ကိုယ်တိုင် မဆက်ဆံဖူးလို့ အသေအချာမသိ
စီနီယာတွေကတော့ သည်လိုပဲ ပြောပြခဲ့ရဲ့..) အဲ့ကောင်တွေထက်စာရင်တော့..
ဗမာယောက်ျားက ယပက်လက်မှာ ဈေးကောင်းရသပေါ့ဗျာ …
အဲ ..ကျန်တဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ တွေ ဘယ်ကိုထွက်ထွက် အမပြောတဲ့ အဆိုပါ
အချက်တွေ မနိုင်နင်းမှု …အိမ်ကိစ္စဆို မိန်းမ အလုပ်လို့သာ အမြင်ကျဉ်းကျဉ်း လက်ခံထားမှု
တွေကြောင့် ဘိရုမာ ယောက်ျားတွေဟာမစွံတာ များပါတယ်ဗျာ …
တကယ်တော့ အိမ်မှုကိစ္စဆိုတာ အိမ်သားတိုင်းရဲ့ အလုပ်ပါ …
ကျားကျား မမ ပေါ့ …ဖြစ်သင့်တာက အလုပ်ပိုပင်ပန်းတဲ့သူကိုသာ
ဦးစားပေး အနားခိုင်းသင့်တာပါ …၂ယောက်စလုံး အလုပ်ထွက်လုပ်တဲ့အိမ်မှာတော့..
တယောက်တလှည့် ဒါမှမဟုတ်လည်း ၂ယောက်သား ပူးပေါင်းပြီး လုပ်သင့်ကြောင်းပါ…
တနေ့ညကမှ အသက် ၃၀ကျော် သိပ် အဆင်မပြေတဲ့ အိမ်ထောင်တခုကို
တီဗီရိုက်ပြတာ ကြည့်ရရဲ့ …
အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်နေတာ …အဆိုပါ တီဗီစင်တာက …
အကြံဥာဏ်လေးတွေ နားထောင်ပြီး ပိတ်ရက် .. ယောက်ျားလည်း ဂေါက်သွားမရိုက်
မိန်းမလည်း ရှော့ပင် မပတ်ဘဲ ..အိမ်မှာနေ ..အတူ ချက်ပြုတ်စား …သူ့ကိုယ် နှိပ်ပေးတဲ့အခါ
သူက ကိုယ့်ကို သူဖတ်ထားတဲ့ ၀တ္ထုအကြောင်း ပုံပြင်လေးလို ပြောပြ…
လုံးဝ romantic ဖြစ်တဲ့ နေ့တနေ့ကို ဖြတ်သန်းရင်း …
ပိုကောင်းတဲ့ ပိုနားလည်မှုပြည့်တဲ့ ပိုမိုအဒွန့်ရှည်မယ့် relationship ကို
ချဉ်ပေါင်တိုး သီချင်း ဆိုလိုက်ပါဦးမယ်…
ဒီ Post ရေးသူဟာ မောင်ဂီ ဖြစ်လို့ ကျွန်မ ဒီလို မှတ်ချက် ကို ပေးတာပါ။
သူ နဲ့ ကျွန်မ တကဲ့ တူဝရီးလို ဖြစ်နေတယ် ယူဆလို့လဲ ပါပါတယ်။ :-)
နောက် အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေထဲ မှာ Hard drive Failure ကြောင့် Down သွားခဲ့တဲ့ Email Server Problem မှာ ကျွန်မ ဘယ်သူ့ ကို အပြစ်ပုံသင့် လဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားနေခဲ့တဲ့ အချက် ကြောင့်မို့ လဲ ပါပါတယ်။
တစ်ခုခု စိတ်အလိုမကျရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်မှာ အခက်အခဲတွေ နဲ့ အဆင်မပြေရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အကြောင်း/ မှန်းတာတဲ့ အရာ ဖြစ်မလာ ရင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူများ နဲ့ အငြင်းအခုံ လုပ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့် မဲ့အစား သူများ(သို့) အခြား အကြောင်း တွေ ကို ဆွဲယူပြီး အပြစ်တင်လေ့ ရှိတာ များပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီလို လုပ်လေ့ ရှိတာလဲ။
(၁) တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်မှာ ကို အကြောက်တရား နဲ့ ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွန်း ပျောက်သွားတဲ့ အခါ
(၂) ကိုယ်က သူများတွေကို ကိုယ်ပြောသလို ဖြစ်အောင် အတွက် သူတို့ ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ သူတို့ အားနည်းချက် တွေကို ထောက်ပြ အပြစ်ဖို့ ဖို့ကြိုးစားတဲ့ အခါ
(၃) ပြသနာဖြစ်တဲ့ အခါ ကိုယ့်တာဝန်ကို ကောင်းကောင်း မယူနိုင်တဲ့ အခါ / တနည်း ကိုယ့်အမှား ကို မဝန်ခံချင် တဲ့ အခါ
(၄) ဖြစ်ခဲ့လိုက်တာကို ယေဘူယျ ကျကျ လက်ခံနိုင်စွမ်း မရှိတဲ့ အခါ
အခြား၊ အခြား သော အကြောင်းပြချက် အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
မောင်ဂီ ဒီရက်မှာ ပေါက်ကွဲပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှစွာသော အပျိုကြီး၊ အပျိုလတ်၊ အပျိုလေး များကို အပြစ်ရှာနေ ရခြင်းမှာ အကြောင်းမဲ့ မဟုတ်ဘဲ
(၁) သူကြိုက်တဲ့ သူကို အကြောင်းတစ်ခု နဲ့ မသိမ်းသွင်း နိုင်၍ လက်လွတ်ရမည်ကို စိုးရိမ် ထိတ်လန့် နေခြင်း
(၂) ရွာထဲမှာ အပျိုကြီးများ များနေခြင်း ကို အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် လျှော့ချနိုင်ရန် အတွက် သူ့ စည်းရုံးချက် ဘက်ပါအောင် စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်နေခြင်း
(၃) သူကိုယ်တိုင် အိမ်ထောင်လဲ ပြုချင် သို့သော် အိမ်ထောင်တာဝန်ကို လဲ မယူရဲ ဖြစ်နေသော ကြောင့် သူ့ အပြစ် ကို ဖုံးရန် ကြိုးစားနေခြင်း
(၄) အပျိုကြီး များ လုပ်နေခြင်း ရဲ့ မှန်ကန်သော ယေဘူယျ အချက်များ ကို လက်ခံနိုင်သော အသိစွမ်းရည် မပြည့်မှီခြင်း
ကြည့်ရတာတော့ ဒီလောက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပေါက်ကွဲ နေမှတော့ အပေါ်က အချက်တွေထဲက (၁) ချက် မက နဲ့ ညိ နေပြီ ထင်ရဲ့။ ;-)
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သော တူလေးမို့ သူ့ကို အပြစ်မဖို့ ဘဲ တစ်ခြား ကို အပြစ်ဖို့ ဖို့ ကြိုးစား ရရင်ဖြင့်
ဟို လူကြီး ရဲ့ “မြန်မာပြည်က လူဦးရေ နဲတာ မွေးနှုန်း နဲလို့” တို့ ၊
“မဥူသက နတ်ပန်း မဟုတ်၊ ခူးကြ၊ ခူးကြ” တို့ နဲ့
ကလေးတွေကို မြှောက်ပင့် အားပေး နေမှ တော့(စ်) ……..
ဟင်း …. မပြောချင်တော့ပါဘူး(စ်) ။ (မောင်ဗိုက် ယနေ့စတိုင် ကို ကော်ပီကူး သည်)
အေးချေး အေးချေး ….အရီး..
သများ က သများ အတွက် မဟုတ်ပါဝူးချင့်….
သများ စွံသလို …မစွံကြရှာတဲ့ အာပျိုဂျီးဒွေကို
အားပေးတဲ့သဘော ..ဘောင်တွေကို ကျော်ကြည့်စေချင်တဲ့ သဘောနဲ့
သများ ပလင်န် ကတော့
ဟိုကဗျာဆြာပြောတဲ့ တောင်ကုန်းအမှတ် ဘယ်လောက်ဆိုလား ဘာဆိုလား ..
အဟဲ ..အဲ့ဒါ …အသိမ်းခံမလို့ …
ဘာရယ်မဟုတ် ဘော်ဘော် .၀က်ဒင်တွေများတာရယ်…
၀က်ဒင် ဖိုတိုဂလပ်ဖီလေ့လာနေတာရယ်ကြောင့် …
စရေးလိုက်ရင်း ..အီနားတွေ ရှား ကုန်တာပါချင့် ….
လူပြိုသိုးကြီးများ ဂိုဏ်းကလည်း ထောက်ခံအားပေးလေတော့..
ပိတ်သတ်ကြီး အတွက် ပိတ်သတ်ကြီး အာသီသရှိတဲ့
ရာသီစာ လေး …အဟိ…
တနေ့ကပြောတော့ နောက်ဆယ်နှစ်နေလို့ အသက် တုံးဆယ့်ရှောက်ကျမှ တဲ့
ခု ပြောပြန်ဘီ နောက်နှစ်တဲ့.. လူဂျိုး..
စိတ်အတက်အကျ မြန်တဲ့ရောဂါ ရှိပါတယ်ဆို …..
ဂီဂီ့ရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကရေလည်မိုက်ပါတယ်။ ဂီ့ဂီ့ပြောသလိုတခါမှမစဉ်းစားမိပါဘူး။ မိန်းမတွေကို နှိမ်တယ်လို့ပဲအမြဲမြင်ပါတယ်။ အခုဂီဂီပြောမှပဲ ဖက်ပေါ်ဆူးကျလဲ ဆူးကျိုး၊ ဆူးပေါ်ဖက်ကျလဲ ဆူးကျိုးမှန်းသိသွားပါပြီ။ ဆူးကျိုးမှာကြောက်တာနဲ့တော့လူပျိုဂျီးမလုပ်စေချင်ပါ။ အပျိုဂျီးတယောက်တိုးသွား မှာစိုးလို့ပါ။ ပြေးပြီ ဒေါက်ဂလက် ဒေါက်ဂလက်
ဘာပြောပြော ကျုပ်ကတော့ ဒီစာပိုဒ် သောက်ရမ်းခိုက်ဒယ် ..
“… ရည်းစားထားရင်ကို ..ယောက်ျားဘက်က စပြောရမယ်တို့…
အဲ့ဒါများ ခယ နေရသေးတယ်… ချဉ်ထှာ …။ …”
ဒါ့အပြင် ဒီထဲရေးထားတာတွေဂလည်း အမှန်ချည်းပဲ ..
တိုဂီကို ထောက်ခံပါဒယ် …
ဂလို ချဉ်ဒဲ့ကြောင်းဒွေ ဆက်ချအုံး ကိုယ့်ဆြာရေ .. ရေးထားတာတွေဂ မိုက်သဗျ … ချယ်ပဲ …
အထက်ပါ ကိစ္စများနဲ့ ပတ်သက်လို့
ဂေါတမဗုဒ္ဓကတောင်ခွင့်ပြုထားတဲ့.. ဘိက္ခူနီမ(ရဟန်းမ) .. မြန်မာပြည်မှာ… ၀တ်ခွင့်..(ရဟန်းခံခွင့်) မရှိဘူး..။
မိန်းမမုန်းငယ်ဖြူဘုန်းကြီးတွေ.. မိန်းမအကြောင်းမသိပဲ.. နှိမ့်ချရေးသမျှ..ခံရရှာတယ်..
ထမိန်အောက်ဝင်ရင် ဘုန်းနိမ့်တယ်..။ မိန်းမအောက်နေရင်.. ဘုန်းနိမ့်တတ်တယ်.. သင်ကြားအပြောခံထားရတယ်..
မယားပြိုင်ထားခွင့်ပေးထားပေမဲ့.. လင်ပြိုင်ကို.. ဥပဒေအရခွင့်မပြုထားဘူး..
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ.. ယဉ်ကျေးပါတယ်.. နွဲ့နောင်းပါတယ်ဆိုပြီး.. (မြှောက်ပေးပြီး). အလုပ်တွေကျ ယောက်ျားတန်းတူ.. လုပ်ခိုင်းတဲ့.. ဓလေ့ယဉ်ကျေးမှု.. အမြစ်တွယ်နေတယ်..
(ဥပမာ.. အုပ်သည်။ အကြော်ကျော်..။ အိမ်တွင်းမှု..စသည်..)
မြန်မာအမျိုးသမီးများဟာ.. ကမ္ဘာတန်းယှဉ်ရင်.. တခြားနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေထက်… နိမ့်ကျကြောင်း..
အဆင့် ၁၀အပြည့်ထား.. ၁ကိုအကောင်းဆုံးထားရင်.. ၇-၈လောက်မှာရှိနေကြောင်း..
ဘာသာရေးတော့ မသိလို့ မပြောလိုဝူး…
အဲ့ …အိမ်ထောင်ရေးတော့ ..နည်းနည်း ၀င်ညှီမယ်…
ဘာလဲဂျာ ..၁လင် ၁မယား စနစ်ပေါ့ …
လင်ပြိုင်ထားခွင့်တော့ လုံးဝ(လုံးဝ) ကန့်ကွက်ပါတယ်….
ဘယ့်နှယ့် ..ထွက်လာတဲ့ အချိုရည်ဗူး …
သူ့ အကြွေစေ့ ကြောင့်လား မသိ ကိုယ့်အကြွေစေ့ကြောင့်လားမသိ…
အကုန်လုံး နားကားမယ့် ကိစ္စဂျီး
ယောက်ျား မယားပြိုင်ထားခွင့်လည်း ပိတ်ပင်သင့်တယ်..
(နေတုန်းတော့ ပြေလည် ရင် ရှော့မရှိဝူး ..သေမှ အမွေကိစ္စ ကွိုင်တက်လွန်းလို့)
မကျေနပ်ရင် တယောက်ပြီးမှ တယောက်ယူကြ ….
တနေ့ ယူကြရမည် ..
မယူခင် လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြ…
” သများ ပလင်န် ကတော့
နောက်တော့ ထပ်ရေးတာက ၊
” တနေ့ ယူကြရမည် ..
မယူခင် လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြ… ”
အင်းးးး ၊ ဒီနှစ်ထဲ မီးကုန် ယမ်းကုန် ကြဲမယ့် သဘောပေါ့ ။
ဒါပေမဲ့အပျိုကြီးလုပ်ရတာပျော်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်နော် . . .
ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရလျှင် ယောကျာ်းတွေ ၊ မိန်းမတွေ အခွင့်ရေးတွေ ၊ တာဝန် ၀တ္တရားတွေ ခွဲခြားတာက ကမ္ဘာဦးအစကများလားပဲ ။ ။လုပ်နေကြအလုပ်ကို လုပ်နေကြလူတွေပဲ လုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အယူဆကြောင့်ဖြစ်မယ် ။သူ့အလုပ် ကိုယ့်အလုပ်ခွဲနေလို့ ၊ ဒီလိုမျိုး ယောကျာ်းအလုပ် ၊ မိန်းမအလုပ်တွေ ကွဲကုန်တာဖြစ်မယ် ။ ဒါ့ကြောင့် တလှည့်ပြောင်းတဲ့အနေနဲ့ ယောကျာ်းတွေ အိမ်အလုပ်လုပ်ပြီး ၊ မိန်းမတွေ အပြင်ထွက် ပိုက်ဆံရှာကြပါကုန် ။
ဒန်တန်တန် ပြေးပြီ ။ ဒက်ဂလောက် ဒက်ဂလောက် :D
ဖိုက်ရီးယားစ်လိတ်တာမှာ ….. မမအိတုံတို့အိမ်ကိုသွားလည်ရင်
မြင်ရမယ့်မြင်ကွင်းလေးက ဟိ ဟိ .. ပြောတော့ပါဘူး
ဟီးဟီး ..မိုးဇက်ရေ …. မိန်းမတွေ အလှပြင်ဖို့ ၊ လက်သည်းနီဆိုးဖို့ အချိန်ပိုရတာပေါ့လေ …
ညည်းတို့ အလှပြင်ဖို့ ကျုပ်တို့က ဘီဘီပုလင်း ခါးဂျားထိုးရင်း
ဟင်းအိုး မွှေနေရတော့မပေါ့ …။(ဆိုင်ထိုင်ဖို့ အချိန်မရှိတော့လို့..)
အင်းလေ.. အဲ့ဒါလည်း ကောင်းတာပဲ …။
ညည်းတို့ ပိုက်ပိုက်အရှာထွက်ချိန်တွေ ကျုပ်တို့ လူစုပီး အတင်းတွေတုတ်
ကျန်သေးတယ် တစ်ချို့မိန်းမတွေလို အိမ်မှာနေရင်းလက်မှုပညာလေးတွေလုပ်ရင်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ငွေရှာခိုင်း စာရေးတတ်တဲ့သူကို စာရေးခိုင်း
ကီလားလေးအဇူဂီဆိုရင် အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ရင်း အိမ်ရှေ့မှာဗယာကြော်ရောင်းတာ အတော်စီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုပဲ .. သူ့မိန်းမဆိုရွှေတွေဝတ်ထားတာ တောကသဂျီးသမီးကျနေတာပဲ ..
မိုးစက်ရေ ဗယာကြော်တင်မဟုတ် တော်ကီတွေရော ဂေါ်လီတွေရောရောင်းနေတာ သူ့စီးပွားမဖြစ်နေပါ့မလား ။ ကျန်သေးတယ် ချစ်တီးဟင်း ပဲကုလားဟင်း အကုန်ချက်ရောင်းတာကလား ။ လူကြည့်တာနဲ့ ကုလားစာရောင်းတဲ့သူမှန်း လူတကာတန်းသိတော့ ကျော်အောင် ညာစရာမလို ဘူးလေ။ နာမည်က ရပြီးသား။
သူ့ဆိုင်နာမည်က ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ဆိုလား ဘာဆိုလား။ တခါတခါ ချီးဖတ်တို့ ချဉ်ဖတ်တို့လည်း ထုတ်ထုတ်ရောင်းတယ်။
သူ့မိန်းမက အခုဆို ရွှေတင် မဟုတ် တကိုယ်လုံးကို စိန်စီထားလို့ လက်လက်ကို ထနေပါရောလား။
အယ်… ပြောရက်လိုက်ကြတာ …အေ….
၀မ်းတူးရိုက်တာများ အတိုင်အဖောက်ကို ညီလို့ …
အာရွန် လန်နွန် နဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင် တိုက်စစ်အတွဲကျနေတာပဲ …
(သိတယ်မလား ..၂ယောက်စလုံး jp လေးဒွေလေ..)
မမပူးခ်ျရေ အခုပဲကြားရတဲ့သတင်းက အဲဒီအဇူဂီရဲ့မိန်းမက သူ့ကိုဆင်ပေးထားတဲ့စိန်တွေရွှေတွေအပြင် အတွင်းပစ္စည်းတွေအကုန်ယူပြီး နောက်ယောကျာ်းနောက်လိုက်သွားပြီတဲ့
ဈေးထဲက ဈေးသည်တွေလွှင့်ပစ်တဲ့ အသီးအရွက်အပုပ်အသိုးတွေနဲ့ ချဉ်ပတ်စိမ်ရောင်းနေပါတယ်တဲ့ သနားပါတယ် ..
ခုမှ ပြန်တွေ့လို့ မန့်လိုက်ပါတယ်…
မောင်လေး ..မိုးဂုတ်. ..သများကို ရှယ်သမသွားတာပဲ…
အော်… လက်စသတ်တော့ အရေးအသားကြည့်လိုက်ပါတယ်..နောက်ဆုံးတော့ မစ်စတာဂီကိုး။
ဂီ ပြောသလိုပဲ…. သနားထှာအေ… ဟုတ်ပါ့အေ….. ယောက်ျားရင့်မာကြီးတွေများ ပက်ပက်စပ်စပ်ကို
ညီမလေးမိုးဇိ မမတုံ ကိုအေကေကေအိုနဲ့ မမပူးခ်ျ ကို လွမ်းမိပါကြောင်းဗျို့
.. မယ်ကင်းက.. ဗန်းမော်ဆတော်ကြီး dirty words တွေနဲ့ပြောဆိုတာခံရပြီးမှ.. ထူထောင်နိုင်ခဲ့တာ..
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ. ယောက်ျားတွေနဲ့.. တန်းတူအောင်ညှိယူရင်းပေါ်လာတဲ့.. လူတန်းစားလို့ယူဆမိတယ်..
ဘယ်တော.မှပြေလည်မှာ မဟုတ်တဲ. တိုက်ပွဲပါပဲ..။